Distros sy programa ho an'ny hopitaly na tobim-pitsaboana | Avy amin'ny Linux
Distros sy programa ho an'ny hopitaly na tobim-pitsaboana
Betsaka ny zavatra hita amin'ny Internet momba ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa lehibe sy lehibe, saingy kely dia kely ny fahitana momba ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny karazana orinasa na andrim-panjakana hafa toa ny hopitaly na tobim-pitsaboana, izay ny lohahevitra andehanako hikasika. anio.
Ny Vondrona Biolinux ao Buenos Aires-Argentina dia nanatanteraka taona maro lasa izay (2003) fanadihadiana feno momba ny toe-draharaha informatika any amin'ny hopitaly Arzantina izay mampiseho, toy ny any Amerika Latina rehetra, ireo nuansa manokana toy ny ...
Ambaratonga ambany amin'ny solosaina amin'ny hopitaly ary ambany ny isan-jaton'ny fampiharana tambajotra amin'ny hopitaly
Tsy misy rafitra fiasa tokana ao amin'ny hopitaly na tamba-jotra isam-paritra, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fanarahana fenitra ny fenitry ny fifandraisana, fizarana fampiharana, fitaovana sns.
Tsy misy rafitra tantaram-pitsaboana tokana ao amin'ny toeram-pitsaboana, fa ny rafitra eo an-toerana ihany no tsy misy fenitra.
Tsy misy fampiraisana mitambatra ny rafitry ny solosaina hopitaly miaraka amin'ny fitantanana sary sy telemedicine
Ny ankamaroan'ny rafi-rindrambaiko dia manana fananana, novokarin'ny programmer na orinasan-rindrambaiko, miaraka amin'ny vidin'ny fampandrosoana sy ny fahazoan-dàlana.
Ho fanampin'izany, misy ny tsy fisian'ny rafi-pandaminana sy fitaovana solo-miasa solosaina eo ambanin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Ny loharanom-bola voafetra dia miharihary amin'ny lafiny iombonan'ny fitaovana misy.
Ny faritry ny hopitaly lehibe amin'ny hopitaly dia mifanaraka amin'ny fitantanan-draharaha, kaonty ary faktiora.
Araka ny ho hitanao, ireo tranga ireo dia tsy maintsy aseho amin'ny firenena maro ary tsy mila ilaina satria izany rehetra izany dia azo rakofana amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana. Avy eo maneho hevitra aho hoe iza amin'ireo fizarana sy rindranasa misy ho azy.
SaluX Io no anaran'ny fizarana ofisialy ny vondrona, tetik'asa vaovao an'ny Vondrona BioLinux izay anenjehana ny fananganana fizarana GNU / Linux ho an'ny hopitaly sy andrim-pahasalamana. Ny SaluX dia mifototra amin'ny Debian ary hamboarina manokana hapetraka amin'ny hopitaly sy tobim-pitsaboana. Fampahalalana bebe kokoa momba ny tranokala SaluX ao amin'ny http://www.salux-project.eu/es. Mampalahelo fa tsy nahazo fanavaozam-baovao intsony ity rafitra ity nandritra ny roa taona fa napetrako satria fantatry ny olona tamin'izany.
CD-Medic dia fizarana iray hafa miorina amin'ny Knoppix miaraka amin'ireo simulator fitarafana ara-pahasalamana isan-karazany, mpijery DICOM ary rafitra PACS. Hita ao amin'ny http://cdmedicpacsweb.sourceforge.net/cdmedic/es/index.html . Anisan'ireo fampiharana tafiditra amin'izany ny: Amide (Image fusion), Aeskulap (mpijery DICOM), Xmedcon (mpanova endrika), AFNI (famakafakana sy fakana sary an-tsary FMRI), DICOM hamakafaka / Autoconverter SPM, OpenOffice 2.0 (biraon'ny birao), Checker Spell Medical, CUPS (fitantanana printy), Mozilla Firefox (browser), Thunderbird (mailaka), Gimp (fanatsarana sary), Imagemagick (fanatsarana sary), XSane (scan), VLC (mpilalao horonan-tsary) ary Xmms (mpilalao video). Audio) ankoatry ny hafa .
GNU-Med ao amin'ny Knoppix: nisy kinova GNUMed vaovao napetraka ao amin'ny CD Knoppix. Io dia mamela anao hizaha toetra ny GNUMed nefa tsy mila mametraka GNU / Linux. GNU-Med dia rindrambaiko mpizara mpizara multiplatform novolavolaina tao amin'ny Python ary mifandray amin'ny tahiry amin'ny PostgreSQL, Ity rindrambaiko maimaimpoana ity dia ho an'ny fitantanana hopitaly, tobim-pitsaboana sy birao. http://www.gnumed.org/
Debian-Med dia tetikasa anatiny hamoronana "Custom Debian Distribution" izay mifanentana indrindra amin'ny filan'ny fampiharana ara-pitsaboana sy ny fikarohana. Ny tanjon'ny Debian-Med dia rafitra iray feno ho an'ny asa rehetra atao amin'ny fitsaboana, namboarina tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Debian-Med
Care2x dia fampandrosoana informatika hafa ho an'ny hopitaly miorina amin'ny Apache, PHP sy MYSQL. Hita amin'ny fiteny espaniola miaraka amin'ireo fiteny hafa. Izy io dia manana modely amin'ny fidirana sy fisoratana anarana ny marary sy ny matihanina, ny fitantanana ny tahiry fivarotam-panafody, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny laboratoara sy radiology, ankoatry ny hafa. Mianara bebe kokoa amin'ny http://sourceforge.net/projects/care2002/.
OpenClinic manambatra vahaolana open source hanome sehatra fampandrosoana malalaka sy malalaka. Izy io dia afaka miasa amin'ny mpizara tranonkala manohana PHP3 na PHP4, tsy misy karazana olana na fepetra takiana manokana. Mora ampiasaina ny interface mpampiasa, miaraka amina tontonana fitantanana tsotra sy faritra fanampiana eo an-tanana hatrany. Anisan'izany ny asany: ny fitantanana antontan-taratasy ara-pitsaboana, ny fitaterana ny tatitra, ny fitantanana ny mpikambana, ny andraikitra sns. Fampahalalana bebe kokoa amin'ny http://openclinic.sourceforge.net/openclinic/index.html.
Worldvista dia rafitra fitantanana hopitaly. Amin'izao fotoana izao 70% ny modules dia amin'ny Espaniôla. Izy io dia mahazaka hopitaly kely, na tambajotram-pitsaboana aza. Anisan'ireo maody miavaka indrindra ny
Fitantanana ny sary radiolojia, kardrama, sns.
Tantaran'ny marary amin'ny alàlan'ny tranonkala.
Fitantanana dokotera monina sy ivelany
Ny fitantanana ny efitrano, ny trano fanatobiana fanafody ary azo ampidirina miaraka amin'ny rafitra manafatra ireo fitaovana ao amin'ny laboratoara.
Fitantanana vonjy maika, consultations ivelany.
Fampiharana manokana hafa toy ny Odontolinux, rindrambaiko fitantanana ho an'ny biraon'ny nify, voasoratra amin'ny PHP4 ary mampiasa PostgreSQL ho mpitantana angon-drakitra. Fampahalalana bebe kokoa amin'ny http://sourceforge.net/projects/odontolinux/.
Hita ao | Vaovao GNU / Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Distros sy programa ho an'ny hopitaly na tobim-pitsaboana
VIRGINIA PALACIOS dia hoy izy:
TE hahafantatra bebe kokoa momba ny système anao aho, HOSPITALY IZAY IZAY MANOKANA 16 RANO SY TANANA DOKTORORA ARY EO AMIN'NY FITONDRANA / FITEHIRIZAM-BOKIN'NY TRANO 36 LEHILAHY, KA MBA MILA SISTEMA MAHASOA, MAIKA SY MAHAFINARITRA. MIANDRAIKITRA AHO FAMPAHALALANA, Misaotra.
Valiny amin'i VIRGINIA PALACIOS
Virginia: Ny tolo-kevitro dia ny hijerena ny pejy isaky ny tetikasa hahitanao hoe iza amin'izy ireo no mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Ny rindrambaiko DriCloud dia miasa tsara, faly izahay amin'ny rafitra. Ny zava-drehetra dia miasa avy amin'ny rahona ary mifanentana indrindra hitantsika, satria mitovy amin'ny Windows, Mac, Linux ary ny maodelin'ny telefaona finday sy iPad, Android.
Na dia mora be aza ny vidiny, tsy maimaim-poana izany, fa azonao atao maimaim-poana tanteraka izany raha manaiky doka ianao.
Jereo izay lazaiko anao ary lazao ahy ny hevitrao.
firaketana ara-pitsaboana elektronika dia hoy izy:
Efa ela aho no nanana Care2x tao amin'ny tobim-pahasalamako ary ny marina dia tsy manova azy io ho an'ny hafa aho. Tsy manana ny ankamaroan'ny zavatra ampidirin'ny rindrambaiko farany ity, saingy azo ampiharina sy tsotra ampiasaina.
Mamaly ireo firaketana ara-pitsaboana elektronika
Luis Enrique dia hoy izy:
Ny rahona dia natao ka ny fanavaozana rehetra dia atao amin'ny mpizara ao anaty rahona, ka mila mitady a Rindrambaiko fitsaboana. Ka tsy ilaina ny mitazona solosaina mandritra ny alina manontolo mba hikolokoloana. Ny klinika tsirairay avy dia azo antoka fa havaozina miaraka amin'ny rindrambaiko ara-pitsaboana, tsy misy ny fahasarotana sy ny loza ateraky ny fanavaozana ny solosain'izy ireo.
Valiny tamin'i Luis Enrique
Na izany na tsy izany, raha te-hahita ilay ianao rindrambaiko fitsaboana tsara indrindra ampidiro ny rohy izay nasiako marika. Io no fampitahana tsara indrindra hitako. Azonao atao ny mandray fanapahan-kevitra tsara alohan'ny hividianana rindrambaiko ho an'ny tobim-pahasalamanao.
LuisCarlosGonzalez dia hoy izy:
Mampino ny fampitahana avelanao amin'ny lozisialy fitsaboana. MISAOTRA
Valio amin'i LuisCarlosGonzalez
rindrambaiko nify dia hoy izy:
Izaho dia nitantana ny fanabeazana nify nandritra ny fotoana ela tamin'ny XDental Dental Software. Faly be aho.
Mamaly ny rindrambaiko nify
Ailurus 10.2 misy
Mpanjifa Bittorrent ambony 9 ho an'ny Linux